Hagaha Xalaasha ee Cameron Highlands - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hotels Friendly Hotels
The Buuraha dhaadheer ee Cameron waxay ku taal Pahang, West Malaysia. Waxay qiyaastii 85 km u jirtaa Ipoh ama qiyaastii 200 km ayey u jirtaa Kuala Lumpur. Dib-u-gurashada waxay leedahay dad kala duwan oo ka badan 43,000 oo qof.
Meelaha loo yaqaan 'Cameron Highlands' waa mid ka mid ah saldhigyada ugu ballaaran ee buuraha Malaysia. Waxay ku fadhidaa aag 712 km² ah, oo qiyaas ahaan leeg Singabuur, At 5,000 ft (1,500 m) oo ka saraysa heerka badda sidoo kale waa meesha ugu sareysa dalka Malaysia ee wadada laga mari karo. Baadhitaankii Ingiriiska, Sir William Cameron, waxaa loo tiriyay inuu "daahfuray" buuraha dhaadheer intii lagu guda jiray socdaal khariidaynta ah oo ku saabsan aagga xudduudka Pahang-Perak sanadkii 1885. Aagga ayaa horumaray laga bilaabo 1920s markii la xaqiijiyay in noocyo badan oo miraha iyo khudaarta ah, oo ay ku jiraan shaah, waa la kori karaa. Shaaha ayaa ahaa sababta ugu weyn ee Ingiriisku u horumariyo aaggan. Intaa waxaa sii dheer, in badan oo degeyaal ah oo Ingiriis ah ayaa u yimid aaggan sidii "dib u gurasho" laga soo bilaabo cimilada kulul, ee qoyan ee Malaysia inteeda kale. Kadib sanado badan oo shaqo badan oo xaalado adag lagu jiray, waddo ayaa laga dhisay isku xirka Tapah iyo Tanah Rata, taasoo u oggolaanaysa degitaanka buuraleyda. Intaa ka dib, Shaah beero iyo khudaarta beeraha oo u arkay cimilada ku habboon dalagyadooda inay u wareegeen buuraha sare. Maanta, waxaa jira afar waddo oo waaweyn oo aagga gala: laba dhanka galbeed, illaa Ipoh iyo Tapah; iyo laba dhinaca bari, ilaa Gua Musang iyo Kuala Lipis.
Cimilada ayaa ah mid aad ufudud u ah heerarka Malaysia: celceliska heerkulka sanadlaha waa 18 ° C. Inta lagu jiro maalinta, heerkulku marar dhif ah ayuu ka sarreeyaa 25 ° C; habeenkii, waxay hoos ugu dhici kartaa illaa 12 ° C.
Guud ahaan, in badan oo ka mid ah dib u gurashada wali waa keymo (waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 71) waxayna martigalisaa nidaam deegaan oo hodan ah. Fadlan tixraac #See si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan duurjoogta ku nool Xeebaha Sare ee Cameron. Waxaa jira sideed buurood oo dib ugu noqoshada ah. Waxay kala yihiin Mount (Malay: Gunung) Batu Brinchang (2,031 m), Mount Berembun (1,840 m), Mount Irau (2,091 m), Mount Jasar (1,696 m), Mount Mentigi (1,563 m), Mount Perdah (1,576 m) and Buurta Siku (1,916 m). Wadooyinka hawadu waxay u horseedaan booqdayaasha goobo qurxan, biyo-dhacyo iyo tuulooyin aan caadi ahayn.
Magaalooyinku waxay ku yaalliin xarumo taxane ah oo dhererkoodu yahay 25 km. Waqooyiga ilaa koonfurta kuwani waa:
Kampung Raja - mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn; u dhow waddooyinka Ipoh iyo Gua Musang Brinchang - Laga bilaabo barta Gunung Brinchang (2032 m), beeraha shaaha ee Boh iyo beero badan (strawberries!) Taman Tringkap Kea Farm Brinchang Tanah Rata - waa magaalada ugu weyn ee Cameron, oo ay ugu jeceshahay boorsooyinka. Barta laga bilaabo Gunung Beremban (1840 m) iyo beero shaaha laga cabo Bharat. Ringlet - mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn; u dhow waddooyinka Tapah iyo Kuala Lipis Bertam Valey
Buuraha dhaadheer waxaa looga mari karaa wadada labada xeebba, in kastoo socdaalayaasha badankood ay ka soo galaan galbeedka. Ipoh waxay leedahay waddo ilaa buuraleyda ah oo soo marta Simpang Pulai, wadada kale ee dhanka galbeed ka timaadana waa dhanka koonfureed, iyadoo loo sii marayo Tapah. Wadada weyn ee ka timaada dhanka bari waxay soo martaa Gua Musang; Waxa kale oo jira waddo wareeg ah oo ka timaadda Kuala Lipis (oo labaduba ku yaal Tareenka Jungle).
Ku soo dhowaanaya galbeedka
Ka soo qaado Ipoh, qaado adeegga basaska ee qaboojiyaha leh ee PerakTransit (Stall D2, RM20, 2-3hr, 8:30 AM, 10AM 11:30 AM, 12:30 PM 3PM, 5PM, 7PM) ilaa Tanah Rata kana tag boosteejada basaska ee Ipoh's Amanajaya (10 u jirta bartamaha magaalada). Waxaad halkaas uga imaan kartaa boosteejada baska ee Medan Kidd ee u dhow xarunta tareenka, adoo raacaya baska T30a, T30b ama 116 (1.80 RM 30min kasta). Basaska tagaya buuraleyda dhaadheer waxay sii maraan Simpang Pulai waxayna istaagaan magaalooyinka sida Kampong Raja iyo Brinchang. Hubso inaad u sheegto darawalka haddii aad u baahan tahay mid ka mid ah magaalooyinkan.
Laga soo bilaabo Kuala Lumpur, basaska taga Tanah Rata waxay ka baxaan Terminal Bersepadu Selatan (RM30-RM39, 4½ hr, 8:30 AM–3:30PM in kastoo inta badan subaxa). Basaska qaar internetka ayaa laga dalban karaa.
Laga soo bilaabo Penang, baska Unititi Express wuxuu rakaab ka qaadaa Prangin Mall oo ku yaal Georgetown ilaa Tanah Rata ilaa RM35 (7:15 AM iyo 1:30 PM). Si kastaba ha noqotee, baska ka taga Tanah Rata illaa Penang (RM32, 8AM iyo 2:30 PM) wuxuu istaagi doonaa Sungai Nibong waxaana laga yaabaa inaad u baahato inaad raacdo bas maxalli ah ama taksi aado Georgetown.
Laga soo bilaabo Singapore, basaska VIP-da ee habeenkii ee ay ka shaqeeyaan Grassland iyo Fivestar waxay ka tagayaan daarta / dhismaha adag ee 'Golden Mile' (SG $ 55-SG $ 65, 10 hr). Basasku waxay istaagaan Ringlet, Lakehouse, Brinchang Hotel, Equatorial Hotel, Heritage Hotel iyo Tanah Rata.
Waxaad tikidho ku heli kartaa https://www.easybook.com/en-my
Ku dhowaad xagga bari
Laga soo bilaabo Taman Negara: Runtii waa suurtagal in la aado Cameron Highlands laga bilaabo Taman Negara iyadoo la adeegsanayo basaska maxalliga ah oo keliya. Xulashada ugu fiican ayaa ah inaad ka tagto Beerta Qaranka iyadoo baska ugu horreeya uu aadayo Jerantut oo weydii darawalka / tikidhada iibiya habka loo maro Cameron Highland. Laakiin safarku aad buu u badan yahay:
Kuala Tahn ilaa Jerantut RM7; 10AM. Jerantut ilaa Benta RM7; Benta ilaa Raub RM5.25. Raub ilaa Tanah Rata RM12 (Cameron Highlands). Waxaad joogi doontaa Cameron Highlands maalinta ugu dambaysa.
Tani waa, runtii safar dheer oo dhowr iskuxir leh laakiin waxay ku habboonaan kartaa qaar safar ah maaddaama wadarta guud ee safarku ku dhow yahay RM30, marka loo barbardhigo RM90 oo ay weydiisteen shirkadaha yaryar ee yar-yar.
Ugu safri Cameron Highlands gaari
Ka imanaya North-South Expressway, ka bax wadada weyn ee Tapah ka dibna u sii soco wadada 59 tooska ah ee buuraha. Waxay qaadataa ilaa 1 saac 30 daqiiqo in la gaaro magaalada ugu horreysa ee Ringlet.
Haddii kale, waad ka bixi kartaa wadada weyn ee Simpang Pulai, Ipoh waxaadna u sii mari kartaa wadada 145 ee Cameron Highlands. Waxay qaadataa illaa 1 saac in la gaaro magaalada ugu horreysa, Kampung Raja. Xaaladda waddadani waxay si weyn uga wanaagsan tahay marinka 59 ee Tapah.
Gawaarida yaryar ee yar yar
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa wareejinta gawaarida yar yar si aad u aado Cameron Highlands:
Laga soo bilaabo Kuala Lumpur-ka soo qaado Switzerland Inn, Jl. Sultan, Chinatown. Duhur maalin kasta RM35, mudada: 4½ hr
Laga soo bilaabo Penang-ka soo qaado Georgetown, 8AM maalin kasta RM50, mudada: 4½ hr
Laga soo bilaabo Taman Negara-ka soo qaado Kuala Tembeling Jetty. RM85, mudada: 5½ hr
Boos celin: + 60 4 2626 171 (Safarka Mooska & Safarka) Banana + 60 5 491 5823 (Kang Tours & Travel)
Saldhigga tagaasida wuxuu ku yaal meel qiyaastii 100 m bari ka xigta boosteejada basaska oo ku teedsan wadada Jalan Besar. Qiimaha tagaasida ayaa gorgortan lagu galayaa maadaama inta badan taksiilayaasha ay caan ku yihiin isticmaalka mitirrada. Diyaar u noqo inaad gorgortan adag gasho.
Dalxiisku wuxuu ka kooban yahay sideed xaafadood. Saddexda magaalo ayaa kala ah Ringlet, Tanah Rata iyo Brinchang. Shanta degsiimood waa Dooxada Bertam, Kea Farm, Tringkap, Kuala Terla iyo Kampung Raja. Dhammaantood way kala fog yihiin midba midka kale fogaan aad u fog. Magaalooyinka ugu caansan ee dib u gurashada waa Tanah Rata iyo Brinchang. Waxay isu jiraan ilaa 4 km.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu arko aagga waa socodka. Ha soo qaadin dallad haddiiba roob da'o.
Saldhigga basku wuxuu ku yaal Tanah Rata. Basaska maxalliga ah ee ku jira buuraleyda waa istaageen laakiin waxaa lagu beddelay basas dalxiis oo ay leedahay shirkaddu oo labadii saacba mar u kala goosha Tanah Rata iyo Kampung Raja. Waxay joogsaneysaa Brinchang, Kea Farm, Tringkap iyo Kuala Terla laakiin waxaad weydiisan kartaa darawalka inuu kugu rido halka aad rabto wadada weyn. Laga bilaabo Tanah Rata, bixitaanku waa laga bilaabo 6:30 AM ilaa 6:30 PM. Soo noqoshada Kampung Raja waxaa loo qorsheeyay 7:30 AM ilaa 7:30 PM. Qiimaha tikidhadu wuxuu ku saabsan yahay RM2-5 iyadoo kuxiran masaafada.
Dalxiisku wuxuu leeyahay isku xir wanaagsan oo wadooyin ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo wadada garaacday, kireynta gaari waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan.
Mootooyinka waxaa laga kireyn karaa qaar ka mid ah guryaha martida iyo bartamaha magaalada Tanah Rata. Waa inaad haysataa ruqsad aad ku wado mootada. Si taxaddar leh u fiiri markaad baabuurka waddo: tusaale ahaan, markaad geeska indha la 'ha u qaadan in qof waalan uusan ku jirin haadkaaga oo dhaafaya qof.
Qiimaha tagaasiga ee u dhexeeya Tanah Rata iyo Brinchang waa RM6. Waxaad kiraysan kartaa taksi 2 saac ah RM50. Qiimahan waxaa ansixisay dowladda.
By axdi qarameedka
Waad qorsheyn kartaa qorshe safar adiga kuu gaar ah adiga oo kireysta gaari 10-kursi ah. Hubso inaad xaqiijiso eedeymaha kahor intaadan go'aan gaarin.
gudaha Cameron Highlands
Dalxiiska Dalxiiska ee Cameron High Pahang
Qasnadaha Century Resort Cameron Highlands
Buuraha Equatorial Cameron
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia > Hagaha Xalaasha ee Cameron Highlands